मृ’त धर्माकुमारीको काखमा ३२ महिने छोराको भावुक बस-यात्रा ! – Nepal Online Khabar
मृ’त धर्माकुमारीको काखमा ३२ महिने छोराको भावुक बस-यात्रा !
भाद्र ५, २०७८ शनिबार 262
काठमाडौं : सामाजिक संजालमा मृ’त आमाको काखमा शान्त रहेर सुतिरहेको एक बालकको तस्वीर यतिखेर भाइरल बनेको छ । जसले आम मानिसलाई भावुक बनाएको छ । उक्त तस्वीर हो, रुकुमपश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका- ९ की २८ वर्षीया धर्माकुमारी बटाला र उनका ३२ महिने छोराकाे ।
बिहीबार यात्राको क्रममा धर्माकुमारीको बसमै नि’धन भएकाे थियाे । त्यसपछि काखमा रहेकाे उनको छोरा बसकाे सिटबाट खसेर रोएपछि मात्रै बसका अन्य यात्रुहरुले थाहा पाएछन्, उनी मृ’त भइसकिन् भनेर । स्थानीयका अनुसार उनी लामो समयबाट मुटुको समस्याले ग्र’सित थिइन् । उनले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचार गराए पनि सन्चो नभएपछि श्रीमानसँग सल्लाहमै उपचारको लागि नेपालगञ्ज जाने निर्णय गरेकी थिइन् । उनका श्रीमान नेपालगन्जमर् कार्यरत रहेकाे बताइएकाे छ ।
सोही अनुसार उनी बिहीबार राति बस चढेर नेपालगञ्जतर्फ हिँडिन् । काखमा ३२ महिनाको छोरा थियाे । छाेरालाइ छाडेर जाने अवस्था नभएपछि काखमै बाेकेर हिँडिन् । उनका श्रीमान दलबहादुर बटाला नेपालगञ्जमै ठेकापट्टाको काम गर्दै आएकाले उनकाे उपचारको लागि बोलाएका थिए । स्थानीयका अनुसार श्रीमान बाहिरै भएकाले घरको सबै व्यवस्थापन गरेर घर रेखदेख गर्ने जिम्मा छिमेकीलाई दिइएको थियो ।
यात्राकै क्रममा पटक-पटक श्रीमान्-श्रीमतीबीच कुराकानी भएको थियो । उनले श्रीमानलाई आफ्नो अवस्था सामान्य भएको बताउँदै आएकी थिइन् । तर यात्राका क्रममै उनले असहज भएको भनेपछि बसका स्टाफले दोस्रो सिटमा ल्याएर बच्चासँगै राखेका थिए । यात्राकै क्रममा छिप्पिँदो रातसँगै उनकाे प्राण गएछ ।
त्यसपछि मृ’तककाे काखकाे बच्चा सिटबाट झरेर राेएछ । हेर्दा उनको नि’धन भएको पाइएपछि अन्य यात्रुहरु अत्तालिएका थिए । बच्चा रोइकराइ गरेपछि फकाउनका लागि मृ’त आमाकै काखमा राखिएको थियो ।
उक्त भावुक तस्बीर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको हाे ।
बस नेपालगञ्ज पुर्याइएपछि श्रीमान दलबहादुरले जिवित हुने आशामा विभन्न अस्पताल पुर्याएका थिए । तर चिकित्सकहरुले धर्माकुमारीलाई मृ’त घो’षणा गरेका थिए । दलबहादुरले पहिलाको श्रीमतीले छोडेपछि धर्माकुमारीलाई दोस्रो बिहे गरेर ल्याएका थिए ।
Prevलोकप्रिय कलाकार शम्भुराज थापाको नि’धन
Nextस्थानीय तहमा अ’नियमितताका चाङ: साढे ५ अर्ब बेरुजु असुल्नै बाँकी !
यी पाँच स्वस्थकर खानाबाट पनि हुनसक्छ एलर्जी